FIFA oo Muqdisho tababar uga furtay Garsoorayaasha Kubadda Cagta Soomaaliya, Sawiro – Cayaaraha dunida
Maxaa Cusub / Somaliya / Wararka | By admin
Wafdi khubarro ah oo ka socda ururka K/Cagta Adduunka ee FIFA ayaa magaalada Muqdisho tababar uga furay garsoorayaasha Kubadda Cagta Soomaaliya, iyadoona munaasabadda tababarkaasi ay ka soo qeyb galeen madaxda xiriirada kala duwan ee Isboortiga.
Tababarkaan oo ay ka qeyb qaadanayaan in ka badan 20-Garsoore ayaa iyagu ka kala socda kooxaha K/Cagta Soomaaliya, waxaana sidoo kale munaasabadda furitaanka tababarka ka soo qeyb gelay tababarayaasha kooxaha K/Cagta.
Khabiir u dhashay dalka Masar oo ka socda ururka K/Cagta Adduunka ee FIFA laguna magacaabo Axmed Al-Shanaawi ayaa ka hadlay ujeedada tababarka garsoorayaasha, isagoona sheegay in kor loogu qaadayo xirfadooda oo muhiim u ah ciyaaraha Isboorti ee dalka.
Xafladda lagu daah furayay tababarka garsoorayaasha K/Cagta waxaa kale oo ka hadlay madax ka tirsan xiriirka K/Cagta Soomaaliya, Guddiga Olombikada Soomaaliyeed iyo xubin ku hadleysay magaca garsoorayaasha tababarka qaadanaya.
Xubnihii halkaasi khudbadaha ka jeediyay ayaa hoosta ka xariiqay in tababarada garsoorayaasha Isboortiga dalka uu yahay mid la jaan qaadaya hannaanka garsoor ee ciyaaraha heerka caalami ah ayna ku kororsanayaan nidaamyada cusub ee sharciyada garsoorka K/Cagta ku soo kordhay.